धेरै, एक मिति को लागी तैयार, यसको लागि तयारी को सबै प्राथमिक नियमहरु लाई बिर्सनु र यस मा व्यवहार। २१ औं शताब्दीमा, यो लाग्न सक्छ - के नियमहरू छन्, तर त्यहाँ केहि केटीहरू छन् जो प्रेम गर्दछन् - राम्रो पोसाक, राम्रो व्यवहार र बुद्धिमान पुरुषहरू। अस्वीकार गर्नु र भन्दै जानुभन्दा पहिले तपाईंलाई यसको खाँचो छैन, आफैलाई प्रश्न सोध्नुहोस् - के तपाईं एक मानिस हुनुहुन्छ? केटा? वा मान्छे? र भिन्नताको बारेमा आफैं सोच्नुहोस्!
पहिलो मितिमा फूलहरू - आवश्यक छ वा छैन?
यो पहिलो मितिमा वैकल्पिक हो। उदाहरण को लागी, यदि यो धेरै राम्रो राम्रो बाहिर काम गर्दैन, तब केटी मात्र उनको केहि आकर्षक छैन जो एक मान्छे को एक गुलदस्ता द्वारा लज्जित हुनेछ। तपाईलाई मन पराउनेलाई फूलहरू दिने बानी छ, जससँग तपाईंसँग पहिले नै एक सम्बन्ध छ।
एउटा स ,्केत, यदि पहिलो मिति राम्रोसँग गयो भने, त्यसोभए तपाईंले यस सुखद इशारा दिन सक्नुहुन्छ, अर्को दिन, फूलको गुलदस्ताको रूपमा, भोलिपल्ट बिहान। तपाईं यसलाई एक नोट संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ र लेख्न सक्नुहुन्छ कि साँझ एकदम रमाइलो थियो, कि तपाईं उनलाई फेरि भेट्ने आशा गर्नुहुनेछ र साँझमा उसलाई कल गर्नुहोस्। डेलिभरी सेवा प्रयोग गर्नका लागि र कुरियर द्वारा फूलहरू पठाउनु राम्रो हो। केटी त्यस्तो कार्यबाट अत्यन्तै खुशी हुनेछे, र उसले तपाईको साँझ कलको प्रत्याशामा सारा दिन खर्च गर्दछ।
दाह्री, धुनुहोस्, र राम्रो गन्ध डेटि success सफलताको लागि आधार हो।
यस महत्त्वपूर्ण दिनमा तपाईसँग ताजा सास, सफा सफा लुगा, लगातार डिओडोरन्ट, सफा र सफा न nails हुनै पर्छ। त्यसोभए तपाईं आफूलाई अझै अपरिचित केटीबाट राम्रो प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ।
कहिले ढिला नगर्नुहोस् - केटीहरूलाई यो मनपर्दैन
तपाइँको मिति को सम्पूर्ण परिणाम यो मा निर्भर गर्दछ। केटीलाई पर्खिरहनु हुन्न! यदि तपाईंले उनलाई उठाउनुभयो भने, चाँडै आउँदैन। उनी अझै तयार नहुन सक्छन - त्यसोभए तपाईंले कुर्नुपर्नेछ, र ऊ घबराएर र हतारमा हुनेछ।
केटीको प्रशंसा गर्नुहोस्
तिमीले उनलाई देख्ने बित्तिकै, उनी कति सुन्दर छिन् बताउनुहोस्। मलाई बताउनुहोस् कि कत्ति सुन्दरताले पोशाकले उनको फिगर र आँखाको रंग बलीयो। कसरी यो केश उनको सुहाउँदछ र त्यो कि भव्य / तेजस्वी, आदि।
सबै पछि, केटीहरू आफ्नो पोशाक, उपस्थिति, र केट मान्छे उनको पोशाक मन पर्यो कि को बारे मा पहिलो मिति मा धेरै चिन्तित छन्। साधारण पनि बधाई उनी आफ्नो उपस्थिति को बारे मा सबै शंका दूर गर्नेछ, उनी आराम गर्न सक्षम हुनेछ र साँझ महान हुनेछ।
एक वास्तविक सज्जन बन्नुहोस्
उनलाई अगाडि जान नबिर्सनुहोस्, ढोका समात्नुहोस्, विनम्र हुनुहोस्। यदि तपाईं कारमा हुनुहुन्छ भने, उनको लागि ढोका खोल्नुहोस्, र त्यसपछि मात्र आफैमा जानुहोस्। केटीहरू उनीहरूलाई राम्रो लाग्ने मन पराउँछन्।
उनको कुरा सुन्नुहोस् र प्रश्नहरू सोध्नुहोस्
उनी भन्छिन सबै उनको लागि महत्वपूर्ण छ। उनी धेरै खुसी हुनेछन् यदि तपाईं उनको कुरा सुन्नुहुन्छ, केही प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, तपाईंको कथामा तपाईंको रुचि देखाउनुहोस्।
नराम्रो चीजहरूको बारेमा कुरा नगर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो प्रेमिकासँग अप्रिय चीजहरूको चर्चा गर्नु हुँदैन। तपाईंको युवावस्थामा तपाईंको साहसको बारेमा कुरा नगर्नुहोस्, तपाईंको परिचितहरूको लागी दुर्व्यसनीको बारेमा। व्यक्तिलाई हाँसो वा उनीहरूमा छलफल नगर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, अरूको खर्चमा आत्म-पुष्टि, गफ, तपाईका सुविधाहरूको बढाइचढाइ, यो खराब रूप हो।
यस्तो "सवारी" केवल एक स्पष्ट मूर्खतापूर्ण केटी वा केटीसँग जो तपाइँको पैसामा रुचि राख्दछ, र सम्बन्धमा होइन। र अरूको बारेमा कुरा गर्ने कुरा छुट्टै मुद्दा हो - यो केटीहरूको एक शौक हो पुरुष होईन, उनीहरूले यस्तो ध्यान दिएका छन्, र यो स्पष्ट माइनस हो र केटाको लागि प्लस होइन!
कसले भुक्तानी गर्नेछ?
यदि वित्त अनुमति दिन्छ भने, त्यसो गर्नुहोस्। यो धेरै राम्रो फारम हो। यदि उसले रकम आधामा विभाजित गर्न प्रस्ताव गर्दछ भने, शिष्टतापूर्वक उनलाई इन्कार गर्नुहोस्। उनले पक्कै पनि तपाईंको कार्यको प्रशंसा गर्छिन्।
यो मुद्दा एक केटा र केटी बीचको आकर्षणको आधारमा हल गर्नुपर्दछ। मिति एक धमाकेदार संग गयो, र केटी छिटो घर जान चाहँदैन? यो लामो समयको लागि पहिलो र यादगार चुम्बन हुनेछ।
कल गर्न वा कल नगर्नु?
फेरि, मिति कसरी गयो भनेर न्याय गर्नुहोस्। तपाईंले कल गर्नु भन्दा पहिले तपाई के भन्नुहुन्छ सोच्नुहोस्। एक राम्रो प्रशिक्षित, आत्मविश्वास आवाज संग बोल्नुहोस्। तपाईं चिन्ता गर्न शिक्षकसँग कुरा गरिरहनु भएको छैन।
प्राचीन कालदेखि आजको दिनसम्म शिष्टाचारको इतिहास
शिष्टाचार र शिष्टाचारको मूल नियम
आदर्श पहिलो मिति कसरी अन्त्य हुनुपर्दछ?
58 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,479 प्रश्नहरू।